Qubanaha » Sarkaal sare oo loo xiray dagaalkii ka dhacay magaalada Baydhabo (Akhriso)
Sarkaal sare oo loo xiray dagaalkii ka dhacay magaalada Baydhabo (Akhriso)
Gelinkii dambe ee Sabtidii shalay, ayaa ehelada Sarkaalkaasi oo lagu magacaabo Cabdulle Isaaq ay ku soo xireen Saldhiga Baydhabo, iyagoona doonaya in waan-waan ka galaan dhibkii uu gaystay.
Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed, Shariif Xasan Sheekh Aadan, ayaa Jimcihii amray in la soo xiro Sarkaalkaasi, maadaama uu sababteedu leeyahay in dad badani dhintan.
Cabdulle Isaaq, ayaa ciidan uu horkacayay ku amray in ay xoog ku galaan xeradaasi, ka dib markii ciidan kaloo ilaalo ahaa ay u diideen in gudaha u galaan xerada. Waxaa la’ogyahay in iska horimaadka dhex maray labada ciidan ay ku dhinteen 17 ruux, oo u badan qoysaska barakacayaasha, iyadoo tiro kalana ay ku dhaawacantay.
Dadka rayidka ahi ee dhintay, ayaa waxaa ku jira dumar iyo carruur. Isbitaalka Guud ee Baydhabo, ayaa la dhigay dad qaba dhaawacyo halis ah, waxaana laga cabsi qabaa in dhimashadu ka badato tirada hadda la’ogyahay.
Cabdulle Isaaq oo ka tirsan Saraakiisha Ciidamada Daraawiishta ee Koonfur Galbeed, ayaa waxay ehelo dhow yihiin Taliyaha Ciidanka Booliska Koonfur Galbeed, General Mahad C/raxmaan Aadan.
Waxaa soo baxaya warar sheegaya in Cabdulle Isaaq aanu isu arkinba nin dembiile ah, waxaana uu doonaya in laga sii daayo gacanta sharciga, isagoo isu arka nin ka soo jeeda beel hubeysan. Dadka reer Baydhabo, ayaa ku sheegaya in ninkaasi uu aaminsan yahay in aan la marsiin doonin cadaaladda.
Odayaasha Dhaqanka ee degan Magaalada Baydhabo, ayaa marar badan gorgortan ka galay Saraakiil iyo ciidanba fal dembiyeedyo ka gaystay Xarunta Gobolka Baay, waxaana ay diideen in la horgeeyo Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida, taasi bedelkeeduna kiiskooda lagu dhameeyo xeer jajab.